Ergada oo shrka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka ku sifeeyey mid heshiis buuxa lagu gaarayo (MAQAL) – Radio Daljir
Nofeembar 5, 2013 3:02 b 0
Muqdisho, November 5, 2013 – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa weli ka socda shirka dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka maalinta saddeexaad, shirka ayaa labbadii maalmood ee hore waxaa lagu gorfeeyey qoddobo dhowr ah.
Gudoomiyaha maxkamadaha Jubbooyinka Maxamed Siciid Carab oo ka mid ah ergooyinka ka qayb-galaya shirka magaalada Muqdisho ka socda, waxaa uu ?sheegay isagoo la hadlayey daljir in is afgarad wanaagsan la gaaray, isla markaasna ay muuqato saan-saan heshiis buuxa.
?qoddobo badan oo shirka la soo dhigay waxaa looga dooday si walaalnimo iyo wanaag ku jiro, ma jiro khilaaf ka dhex-muuqda dhinacyada dib-u-heshiisiintu khusayso.? Ayuu yiri gudoomiye Carab ?waxaan filayaa annagoo gacmaha is haysana in aan ku noqon doono Kismaayo.?
Gudoomiye carab waxaa uu dhaleeceyey dhinacyo uu sheegay in ay dano gaar ah leeyihiin oo warbaahinta ka sheega in aysan ku qanacsanayn shirka, kuwaas oo ka madax banaan gollaha shirku ka socdo.
?Beelaha Soomaaliyeed cid ka maqan ma leh shirkan waa lagu dhan yahay, cid kasta oo degta Jubbooyinka iyanna shirka waa ku dhan yihiin waa joogaan, ma aqaan dadka saxaafada ka hadla waxaan filayaa waxay rabeen in lacago yar la siiyo oo dantoodii bay shirka dhex arki waayeen.? Ayuu hadalkiisa ku sii daray Gudoomiyaha Maxkamadaha Jubbooyinka.
Shirka hadda ka socda Muqdisho waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ah in lala dagaalmo Al-shabaab, isla markaasna la mideeyo ciidamada iska soo horjeeda ee jooga Jubbooyinka, waxaa kaloo la isku afgartay in la horumariyo maamulka Jubba.
Dhegeyso: Gudoomiye Maxamed siciid Carab oo u waramay Cabdulaahi Suldaan oo daljir ka tirsan